Unai Emery oo dhaleeceeyay qaab ciyareedka kooxdiisa Arsenal kulankii Europa League ay xalay ku wada ciyaareen Sporting CP – Gool FM
Unai Emery oo dhaleeceeyay qaab ciyareedka kooxdiisa Arsenal kulankii Europa League ay xalay ku wada ciyaareen Sporting CP
Dajiye October 26, 2018
(Europa League) 26 Okt 2018. Macalinka reer Spain ee Unai Emery ayaa dhaleeceeyay qaab ciyaareedka kooxdiisa Arsenal qeybtii hore kulankii Sporting Lisbon ay xalay ku wada ciyaareen koobka Europa League.
Kooxda reer London ee Arsenal ayaa guul muhiim ee 1-0 ah kaga soo gaartay dhigeeda Sporting CP kulankii ay ku booqatay garoonkeeda José Alvalade kaasoo ka tirsanaa kulamada koobka Europa League.
“Qeybta hore ee ciyaarta ma aanan sameynin wax fursad ah, qaab ciyaareedkeena aad ayu u xumaa, laakiin qeybta labaad waxaan si tartiib tartiib ah u qabanay shaqo fiican”.
“Waxaan dooneynin inaan kulankan guuleysano, si aan u hogaamino Group E ee aan kaga jirno tartanka Europa League, sidaas darteed wuxuu qorshaheenu yahay inaan sii qabano shaqo fiican”.
“Inta ay ciyaarta socotay waxaa jiray waxyaabo badan ee kala duwan shaqsi ahaan iyo xeelad ahaan intaba, qeybta hore ee ciyaarta, anaga ahaan xaalada ma aysan inoo fiicneen, balse ugu dambeyn waan guuleysanin”.
Da’ayarka kooxda Real Madrid ee reer Brazil Vinícius Jr oo difaacay go’aanka tababare Julen Lopetegui
Kahor kulanka El Clasico Marcelo oo hadalo kulul ku karbaashay Cristiano Ronaldo